"भर्खर छैन साइकलको बारेमा: जीवन मेरो फिर्ती" शीर्षक पुस्तक कि एल eople मरिरहेका भन्छन् कि एक बुद्धिमानी उद्धरण छ। जब तपाईंलाई थाहा छ, बाँकी देखिन्छ महत्वहीन छ। बस एक trifle। तर अर्को सत्य छ। मान्छे बाँचिरहेका छौं। यो विपरीत दिशा छ, तर यो उत्तिकै निष्पक्ष सत्य हो। मान्छे हो, र कहिले काँही अद्भुत बाँचिरहेका छौं।
21 औं शताब्दीको महामारी
क्यान्सर वर्ष हजारौं चिकित्सा व्यवहार मा भेटे र पनि ग्रीक र मिश्री चिकित्सकहरु द्वारा वर्णन गरिएको छ। यो झन्, विरामीहरु मा मिति गर्न निदान छ जहाँ एक जवान काम रूपमा कक्षहरू अब काम गर्न सक्षम छन् विशेष गरी वृद्ध। आखिर, वास्तवमा, क्यान्सर - यो पूरा छैन आफ्नो कार्य गर्न सक्ने अपरिपक्व कक्षहरूको संग्रह छ, तर यो समय संग सम्पूर्ण शरीर प्रभावित, फैलियो। अब एक गम्भीर रोग उपचार छ? संसारभरिका वैज्ञानिकहरू क्यान्सर लागि लागूऔषधको विकास मा लगे - र यो क्षेत्रमा झन् सफल भएको छ।
अघि क्यान्सर चिकित्सा विज्ञानियों थप सर्जन थिए र बस ट्यूमर हटाइएको, तर आज सबै भन्दा अक्सर केमोथेरापी र उपचार लागूपदार्थ संग द्वारा अभ्यास भने। निस्सन्देह, क्यान्सर को सबै प्रकार उपचार छैन - त्यहाँ अझै पनि उपचार अवहेलना कि ट्यूमर छन्।
यो ढिलो - राम्रो
Alas, सबै भन्दा ट्यूमर लेट पाठ्यक्रम मा, दबाइ उपचार इच्छित प्रभाव दिनुहुन्छ जब निदान छन्। तथापि, तपाईं अग्रिम यसलाई पहिचान भने, यसको शैशवकालदेखि मा, यो रूढिवादी चिकित्सा उपचार गर्न पर्याप्त सरल छ। धेरै अवस्थामा, उपचार ट्यूमर विजय मा समाप्त भयो।
एक खतरनाक रोग स्क्रिनिङ विधिहरू मद्दत निदान गर्न समय। उदाहरणका लागि, इजरायल मा, समसामयिक mammography धन्यवाद, महिला को बारेमा 90% गर्ने विकास स्तन क्यान्सर ठीक हुनेछ। दुर्भाग्यवश, मान्छे रोकथाम परीक्षा, र फिक्री लक्षण बेवास्ता गर्छन।
Antivirals र क्यान्सर को उपचार
ओन्कोलजी को उपचार को पाठ्यक्रम मा आवश्यक समावेश immunomodulatory लागूपदार्थ। सबै को पहिलो, डाक्टर लामो धेरै भाइरल रोग घातक ट्यूमर को विकास हुन सक्छ भन्ने ज्ञात छ। उदाहरणका लागि, मानव papilloma भाइरस, जनसंख्याको बहुमत मा निदान छ जो ग्रीवा क्यान्सर हुन सक्छ कि उपभेदों को एक नम्बर छ। रोगी को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय कि औषध शरीर आफ्नै रोग विरुद्ध लड्न मदत, त्यसैले उपचार खुराक मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने।
क्यान्सर देखि रक्तअल्पता दबाइ
2016 मा, एक आश्चर्यजनक खोज को वैज्ञानिकहरू गरिएको थियो - पहिले नै आविष्कार "एक क्यान्सर गोली" छ। रक्तअल्पता दबाइ देखि औषधि पसल समतल बिक्री क्यान्सर मा मद्दत गर्छ!
मुख्य कार्य जो क्यान्सर ट्यूमर को शरीर र ब्रेक लगान विकास शुद्ध छ कक्षहरू, - अमेरिकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ले वैज्ञानिकहरु फलाम नैनोकणहरु कारण मैक्रोफेज मा गठन क्यान्सर प्रभाव विनाश प्रतिरक्षा प्रोत्साहित गर्न तैयार समावेश भेट्टाए। को चिकित्सा "Ferumoksitol" भनिन्छ र एक निर्धारण बिना अमेरिकी औषधि पसल उपलब्ध अब छ।
दबाइ को प्रभाव मा चूहों artificially क्यान्सर ट्यूमर संक्रमित को समूह परीक्षण गरिएको थियो। अध्ययन फेला कि "Ferumoksitol" मेटास्टेसिस फैलाउन अनुमति छैन, क्यान्सर कक्षहरू लाइ रोक्छ र गम्भीर साइड इफेक्ट छैन। चाँडै दबाइ क्यान्सर विरामीहरु मा परीक्षण गरिने छ।
क्यान्सर रोग लागि नयाँ लागूऔषधको विकास
आज संसारभरि औषधि कम्पनीहरु धेरै सक्रिय क्यान्सर लागूऔषधको विकास संलग्न छ। तिनीहरूलाई पैसा धेरै ल्याउनेछ भनेर बुझ्न - एक हात मा, तिनीहरूले भवदीय घातक ट्यूमर विरुद्ध लड्न मानवता मदत, आशा अन्य मा।
यस्तो विकासक्रम को आज मुख्य उद्देश्य ट्यूमर नष्ट कि दबाइ सिर्जना गर्न छैन, र आविष्कारशील लागूपदार्थ थप सजिलै र छानेर अभिनय। साँच्चै, त्यसैले चिकित्सा केमोथेरापी लोकप्रिय अक्सर बिरामीको प्रतिरक्षा प्रणाली, पनि फ्लू रोगी गरेको ट्यूमर को सट्टा मार्न सक्नुहुन्छ दबा।
सबै को पहिलो, शोधकर्ताओं भन्न, यसको विकास कारक अवरुद्ध बढ्न र प्रतिरक्षा प्रणाली, आफै प्राकृतिक तरिका मा ट्यूमर नष्ट गर्न सुरु जो बलियो क्यान्सर देखि नयाँ ट्याब्लेट सेल रोक्न गर्नुपर्छ।
को लागूपदार्थ जसको प्रयोग क्यान्सर को उपचार मा पहिले नै अनुमति छ निम्नानुसार छन् बीचमा:
"Quds"। स्विस कम्पनी रशे द्वारा विकास गरे। यो औषधि बजार "Herceptin", र केमोथेरापी "Emtanzina" पहिले नै चिरपरिचित संयोजन छ। संयुक्त राज्य अमेरिका मा हामी पहिले देखि नै यो आम बिक्री को लागि स्विस सहयोगिहरु बाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
"Fluorouracil" - ब्लक डीएनए कक्षहरू संश्लेषण एउटा antimetabolite। "Chlorambucil" एउटै सिद्धान्त मा काम गर्छ। सामान्यतया, तिनीहरूले कक्षको डीएनए नष्ट र यसको विभाजन रोक्न किनभने एन्टि-metabolites सबै क्यान्सर लागि विश्वव्यापी उपाय मानिन्छ। अक्सर प्लेटिनम यौगिकों संग संयोजन प्रयोग गरिएको।
नाम "Glivec" अन्तर्गत बेचिएको "imatinib"। Cytostatic दबाइ antileukemic कार्यहरू छानेर कक्षहरू जो क्यान्सर ट्यूमर को विकास हुन सक्छ मा कार्य। तिनीहरूले अझै पनि साइड इफेक्ट धेरै कारण आफ्नो क्षमता मा खतरनाक कक्षहरू मार्न cytostatics को मुख्य बेफाइदा।
एक्सप्रेस वितरण - धेरै विकासक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका, हाम्रो मान्छे यी लागूपदार्थ प्राप्त गर्न को लागि मात्र तरिका मा ठाउँ लिन भएकोले। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, क्यान्सर को लागि एक उपचार फेला परेन।
थाईल्याण्ड देखि होम्योपैथिक चिकित्सा
2013 मा, यो बिक्री मा थाईल्याण्ड मा एक चिकित्सा औषधीय जडीबुटी संकलन, उपचारात्मक ओन्कोलजी कुनै पनि मंच मा आधारित छ कि रिपोर्ट थियो। यो क्यान्सर लागि लामो समय पहिले फेला र सक्रियतासाथ थाई द्वारा प्रयोग गरिन्छ एक उपचार हो। दबाइ नाम जी-जडीबुटी अन्तर्गत दानाको फारममा उपलब्ध छ। यो औषधीले गरे जो डाक्टर, अब जीवित छ, तर आफ्नो मामला छोरा जारी। Alas, क्यान्सर देखि थाई पाटी सबैका लागि मदत गर्न सक्षम छन् - पहिले नै केमोथेरापी को एक पाठ्यक्रम पारित भएकाहरूलाई, अनुप्रयोगको निर्माता सिफारिस गरिएको छैन। तैपनि, उहाँले मानिसहरूलाई धेरै मदत, 10-20 वर्ष आफ्नो जीवन लम्ब्याउनु।
दबाइ को लागत3000 rubles छ। 60 दाना।
ट्यूमर को उपचार मा रूसी दबाइ
दिइएको रूस र युक्रेनमा anticancer लागूऔषधको भारी लागत, तिनीहरूले उपलब्ध सधैं छैनन्। तसर्थ, रूसी वैज्ञानिकहरूले एक "क्यान्सर गोली" आविष्कार गरेको छ, मूल्य विदेशी analogues भन्दा धेरै कम हुनेछ।
लेट 2016 मा, यो रिपोर्ट थियो, 2018-2019, क्यान्सर लागि नवीनतम उपलब्ध उपचार मा। मिति, यो पहिलो नैदानिक परीक्षा संसारभरि विरामीहरु, सहित को पाठ्यक्रम उपस्थित गरिने र रूस लागि तयार छ।
दबाइ को मुख्य कार्य पीडी-1 को काम गरिरहेको शीर्षक लगाएका गर्दा, क्यान्सर कक्षहरू संग "Masking" हटाउन छ। यो कुरा केही समय प्रतिरक्षा प्रणाली छैन र सक्रिय sprawling क्यान्सर कक्षहरू किनभने तिनीहरूले लुकाएको छन् बस हेर्न भनेर हो। र Masking घट्छ गर्दा तिनीहरूलाई सामना गर्न धेरै गाह्रो छ। भने, तर, प्रतिरक्षा प्रणाली रोगजनकों तुरुन्तै पहिचान, रिकभरी को मौका धेरै उच्च छ। साथै, वैज्ञानिकहरू रूसी बराबर धेरै प्रभावकारी विदेशी एजेन्ट हो भन्ने विश्वास गर्छन्।
जबकि दबाइ जनावर र विरामीहरु मा परीक्षण छ, र यो सबै परीक्षण पाउँछ भने, 2018 मा यो सम्भव क्यान्सर यी चक्की किन्न हुनेछ। लागत विदेशी भन्दा धेरै कम हुनेछ।
उत्प्रेरक को लागी छ: लक्षण, संकेत, अंतर्निहित कारणहरु र सिफारिशहरु